Waya eJerusalema – kodwa akabange esabuya | Scrolla Izindaba
Waya eJerusalema – kodwa akabange esabuya
Nsuku zonke, uConnie Kubheka ulinde ukuthi indodakazi yakhe uNompumelelo ibuye ekhaya – kodwa uNompumelelo wahamba eya eJerusalema futhi akakaze abonwe kusukela lapho!
Ekhuluma ne-Scrolla.Africa ekhaya lakhe elise-Braamfischerville e-Soweto, uConnie uthe kube yisikhathi esinzima selokhu indodakazi yakhe yahamba ekhaya mhla ziyi-14 kuNhlolanja kowe-2019 iya emijondolo yaseJerusalema ngaseDurban Deep, entshonalanga neGoli.
Uthe abantu abaningi bebemtshele izindaba ngokwenzeka kuNompumelelo.
“Abantu bebelokhu bengitshela ukuthi utholakale eseshonile zonke izitho zomzimba ikakhulukazi izitho zangasese, zisusiwe kuye,” kusho umama obephelelwe yithemba.
“Abanye bathi bamthole embhedeni wasesibhedlela kanti abanye bangitshele ukuthi ngeke esatholakala.”
UConnie uthe ukubheka kwakhe kumholele ezindaweni ezesabeka kakhulu.
“Ngibone izidumbu eziningi emakhazeni ase-Roodepoort, e-Baragwanath, e-Leratong nase-Natalspruit ngibheka.”
Uthi okwaba nzima kakhulu ingesikhathi eya emakhazeni ase-Roodepoort ngemuva kokuzwa amahlebezi okuthi uNompumelelo watholakala ebulewe e-Durban Deep.
“Ngabuka zonke izidumbu ezisemakhazeni. Kungithathe izinsuku eziningi ngaphambi kokuthi ngiphinde ngikwazi ukulala,” kusho yena.
UConnie ubuye wabandakanya izangoma nabaprofethi ukusiza ukulandelela umkhondo wendodakazi yakhe ebilahlekile.
“Kodwa izangoma ezehlukene zingitshele izinto ezehlukene,” kusho yena.
Uthe ngoZibandlela nyakenye, waya emijondolo yaseJerusalem lapho okwakuzwakale khona ukuthi indodakazi yakhe ibonakale khona.
Okhulumela amaphoyisa uKaputeni Kay Makhubele uthe kuvulwe idokodo lomuntu olahlekile esiteshini samaphoyisa e-Dobsonville.